FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA SPANADOR - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Spanador
Alika mifangaro mifangaro i Labrador Retriever / Cocker Spaniel
Hank the Spanador amin'ny faha-3 taonany— 'Hank no alika tsara indrindra nananako.'
Ny alika Spanador dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Spaniel Cocker amerikana . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Angel the Cocker Spaniel / black Lab Retriever mifangaro alika (Spanador)
'Ity i Huck amin'ny faha-7 taonany miala sasatra aorian'ny andro sarotra nilalao. Tiany ny fofona sy ny hafanan'ny akanjo avy amin'ny soloina. Izy dia mifangaro Lab / Cocker Spaniel. '
Amy (aka Babba) ilay Spanador amin'ny 2 taona— 'Amy dia alika be fitiavana sy manan-tsaina, lehibe kokoa noho i miasa akoho . Izy dia mahay mamitaka, tia mamerina, tia manafina ary mitady haza lambo ary matetika te hoentim-po. '
Amy (aka Babba) ilay Spanador amin'ny 2 taona— 'Manana fifehezan-tena be izy ary tsy hiampita fetra apetraka ao an-trano, na izany aza misy fahatsiarovana ratsy any an-tsaha. Izahay dia manamboatra izany! '
Amy (aka Babba) ilay Spanador amin'ny 2 taona— 'Azonao atao ny mametraka fitsaboana amin'ny tongony ary tsy hikasika azy izy raha tsy nomena ny baiko, zavatra nampianarin'ny zanako vavy 11 azy. Mora ny mampiofana azy amin'io lafiny io. Tsy izy no mitondra sakafo manokana, raha tsy hoe tena matsiro toy ny salmon. Tena be olona sy be fitiavana izy ary matetika ny olona milaza amintsika fa alika mahafinaritra izy. Ankafizinay izy! '
Daisy the Spanador (Labrador Retriever / Cocker Spaniel mix) amin'ny 8 volana
Rocky, hazo fijaliana Cocker Spaniel / Labrador 4 taona (Spanador)
Alika mpiompy Cocker Spaniel / Lab mix (Spanador) aseho eto amin'ny taona 7 i Malibu.
Max, mifangaro Labrador / Cocker Spaniel — ity pooch voatokana ity dia tia milalao baolina tenisy sy milomano.
Charlie the puppy Spanador vavy amin'ny 3 volana— 'Mamy tokoa izy ary mavitrika be. Tiany ny milalao miaraka amin'ny saka, ary mitady izay mety ho entiny. '
Jereo ohatra misimisy kokoa momba ny Spanador
Zavatra mpiandry ondry sy ny mpanao ady totohondry alika kely
amboadia arctic alika malamute hybrid
fifangaroan'ny collie mainty sy fotsy
inona no atao hoe shorkie mifangaro
shar Pei lavaka omby Mix